A ghọtara Sandals® Resorts Executive oche dị ka onye isi ụlọ ọbịa ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » A ghọtara Sandals® Resorts Executive oche dị ka onye isi ụlọ ọbịa ụwa
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • News • ndị mmadụ • Resorts • Sustainability News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
5 min gụọ
Adam Stewart sonyere na Kọmitii Executive WTTC
Onye isi oche Sandals Resorts 'Onye isi oche, Adam Stewart, akpọọla oku ka ọ sonye na Kọmitii Executive nke World Travel & Tourism Council (WTTC). Ntinye a na -anọchite anya mgbanwe na -aga n'ihu ma na -aga n'ihu Stewart mere n'oge niile ọ na -arụ ọrụ.
WTTC na -anọchite anya mpaghara onwe njem na njem nlegharị anya na ndị otu gụnyere ndị isi 200, oche na ndị isi.
Adam na -ewetara ya ahụmịhe bara ụba ebe ya na nna ya nwụrụ anwụ rụkọrọ ọrụ ọnụ iji wuo ihe dị ugbu a, otu n'ime ụdị ama ama na ụlọ ọrụ anyị.
Stewart kwere nkwa ịga n'ihu na -akwalite ụlọ ọrụ na -adigide ma na -etinyekwa ọnụ karịa ka ọ dị ụnyaahụ.
"Enwere m nsọpụrụ isonye na Kọmitii Executive nke otu ọgbakọ m kwanyeere ugwu kemgbe mmalite ọrụ m," Adam Stewart, Onye isi oche nke Ebe ntụrụndụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, “Otu ndị ndu a na -elekwasị anya na mbọ nke ngalaba njem na njem, ọ na -adịkwa m mma inye onyinye. Anyị niile, anyị ga -aga n'ihu na -akwalite ụlọ ọrụ na -adigide ma na -ejikọ ọnụ karịa ka ọ dị ụnyaahụ, na -echetara ụlọ ọrụ agbata obi anyị na gọọmentị mba ụwa na njem bụ ihe dị mkpa na ndụ. "
Kọmitii Njem Njem Nleta Ụwa na -anọchite anya ngalaba nkeonwe Njem Nleta na njem. Ndị otu gụnyere ndị isi 200, oche na ndị isi nke ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya ụwa niile sitere na mpaghara niile metụtara ọrụ niile. N'ime ihe karịrị afọ 30, WTTC agbaala mbọ ịkwalite mmata nke gọọmentị na ọha nke uru akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze nke Njem & Njem Nleta.
Julia Simpson, Onye isi ala & onye isi WTTC kwuru, sị:
“Enwere m obi anụrị ịnabata Adam na Kọmitii Executive nke WTTC. Adam na -ewetara ya ahụmịhe bara ụba ebe ya na nna ya nwụrụ anwụ rụkọrọ ọrụ ọnụ iji wuo ihe dị ugbu a, otu n'ime ụdị ama ama na ụlọ ọrụ anyị. Onwe m na ezinụlọ WTTC niile na -atụ anya iso Adam rụọ ọrụ n'ọrụ ọhụrụ ya. ”
Adam na nna ya "Butch" Stewart
Ọhụụ mbụ nke ndị guzobere kansụl ahụ ka bụ otu: gọọmentị ga-amata njem na njem dị ka ihe kacha mkpa, azụmahịa kwesịrị ịhazigharị akụ na ụba na ndị mmadụ, ọdịbendị, na gburugburu ebe obibi, yana ịchụso uto ogologo oge. Ndị otu gụnyere ụdịdị nke ụlọ ọrụ ahụ, site na ndị na -anya ụgbọ elu ruo ndị na -eme njem nlegharị anya na ndị ọbịa. Kọmitii Executive nwere oche, ndị isi ala, na ndị isi na -ahụ maka njem na njem nlegharị anya ụwa.
Otu ndị ọrụ afọ ofufo, ndị isi WTTC na-esetịpụ ihe nlereanya, na-enye oge na akụrụngwa ha bara uru iji mee ka ọrụ ụwa gaa n'ihu n'ime ụwa a na-agbanwe agbanwe. Ndị isi ụlọ ọrụ kpọrọ oku isonye na Kọmitii Executive ka ọ bụrụ ihe mkpali maka mgbanwe na mmata dị mkpa, na -akwalite njem nchekwa na ịba ụba maka ọtụtụ puku afọ na -abịa.
akpụkpọ ụkwụ® Resorts
Sandals® Resorts na -enye mmadụ abụọ ịhụnanya kachasị, ahụmịhe ezumike Luxury Include® na Caribbean n'ofe ntọala 16 dị egwu n'akụkụ osimiri na Jamaica, Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, Grenada, na Curacao ga -emepe na Eprel 2022. Ememe 40 afọ, onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ebe niile na-enye ntinye dị mma karịa nke ọ bụla ọzọ na mbara ala. Resorts Sandals naanị gụnyere mbinye aka Love Nest Butler Suites® maka njedebe nzuzo na ọrụ kacha; butlers zụrụ site na Guild of Professional English Butlers; Red Lane Spa®; 5-Star Global Gourmet ™ na-eri nri, na-ahụ maka mmanya dị n'elu, mmanya dị oke ọnụ, na ụlọ oriri ọpụrụiche pụrụ iche; Ụlọ ọrụ Aqua nwere asambodo na ọzụzụ PADI® ọkachamara; Wi-Fi ngwa ngwa site n'ụsọ osimiri ruo ime ụlọ na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ a na-ahazi. Resorts Sandals na -ekwe ndị ọbịa udo nke obi site na mbata ruo ọpụpụ Protocols Sandal nke Platinum nke linessdị Ọcha, usoro ahụ ike na nchekwa nchekwa nke ụlọ ọrụ ahụ emebere iji nye ndị ọbịa obi ike kachasị mgbe ha na-eme njem na Caribbean yana mmachi ọhụụ akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ, mmemme nchedo ezumike zuru oke nke na-egosipụta nkwa ụlọ ọrụ nke mbụ maka ezumike nnọchi n'efu gụnyere ụgbọ elu maka ndị ọbịa emetụta. site na nkwụsịtụ njem COVID-19 metụtara. Sandals Resorts bụ akụkụ nke Sandals Resorts International (SRI) nke ezinụlọ, nke mbubreyo Gordon “Butch” Stewart hiwere, nke gụnyere ebe ezumike osimiri na-agbakwasị ụkwụ na ezinụlọ. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ọdịiche akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Resorts Luxury Include®, gaa akpụkpọ ụkwụ.com.